खिर्कि र खंग्राका अग्नीपिडित सामु अझै राहत पुगेन | Indrenionline.com
Home Feature Breaking news खिर्कि र खंग्राका अग्नीपिडित सामु अझै राहत पुगेन
खिर्कि र खंग्राका अग्नीपिडित सामु अझै राहत पुगेन
२०७३ बैशाख १ गते बुधबार ०६:५९ बजे
शान्त कुमार बुढामगर
दाङ, १ बैशाख
दाङको खिर्कि र खंग्रा नाकाका अग्नी पिडितले जिल्ला प्रशासन र जिबिसको गरी ६ हजार बाहेक अन्य राहत सहयोग पाउन सकेका छैनन् । आईतबार नै खिर्किका १२ घर र खंंग्राका ३ घर जलेर नष्ट भएका हुन् । जिल्ला देखी दुर्गम र टाढा रहेकाले उनीहरुले अन्य निकायबाट सहजै राहत पाउन नसकेको त्यहाँका अग्नी पिडितको गुनासो छ । अहिले उनीहरु खुल्ला आकासमा आश्रय गर्न बाध्य भएका छन् ।
आईतबार बस्तिमा पसेको आगोले घरमा भएका लत्ता कप्डा , खाद्यन्न, भाडाकुडा, नगदे बाली लगायत गरी करिब ४६ लाख बढि क्षति भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यलय दाङले उपलब्ध गराएको ५ हजार र जिबिस दाङको १ हजार गरी हिजो मंगलबार उनीहरुले प्रतिघर ६ हजार राहत प्राप्त गरेको हुन् ।
त्यहाँका बासिन्दा सामान किन्न भारतको बजार जानुपर्ने भएकाले त्यो रकम पकाउने भाडा कुडा भन्दा अरु केही किन्न नपुग्ने अग्नी पिडित बलबहादुर खडकाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“ सामान किन्न भारतिय बजार जानुपर्छ , एक हजार नेपालीको भारतिय रुपैया ५५० हुन्छ , यो ६ हजार नेपालीको ३ हजार ३ सय भारतिय रुपैया हुन्छ , यस्ले त्रिपाल किन्ने की ? भाँडा कुडा किन्ने की ? खानेकुरा किन्ने ? ”
उनीहरुलाई त्यो राहतले सामान्य जिबन यापन गर्न पनि निकै कठिन परेको छ । अहिले त्यहाँका बासिन्दाले आगलागीबाट बचेको पैसाले सामुहीक रुपमा खाने बस्ने गरिरहेका छन् । घरहरु पनि सबै जलेर नष्ट भएपछि उनीहरुसंग अहिले ओत लाग्ने ठाउ पनि छैन । उनीहरु पानी परेपछि भिज्नुपर्ने र रातमा चिसोले कठ्याग्रीनु पर्ने बाध्यता रहेको अर्की अग्नी पिडित पुजा परियारले दुखेसो पोख्नुभयो ।
खरको छानोको घर बनाउनु पर्छ तर त्यो सबै खर डडेलोले खरानी बनाईसकेको छ , त्यसैले अबको एक बर्ष सम्म हामी घर बनाउन सक्ने अबस्था छैन् । परियारले भन्नुभयो –“ त्यतिन्जेल सम्म हामी कहाँ ओत लाएर बस्ने , अबको बर्षा आउला त्यसपछि चिसो मौसम शुरु होल हामी कसरी बाँच्ने ? ”
जिल्ला देखी नजिकका गंगापरस्पुर ६ खर्जौटा र ८ बाँकीका अग्नी पिडितहरुलाई भने जिल्ला प्रशासन , जिल्ला बिकस समिती लगायत दाङ उद्योग बाणिज्य संघले प्रति घरपरिवार ४० केजी चिउरा , ४३ थान त्रिपाल , तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघले ८० कार्टुन चाउचाउ, सांसद योगेन्द्र्र चौधरीले ५० हजार बढिको औषधी , सत्यशाही लमही केन्द्रले ३ क्वीन्टल चिउरा र ६ कार्टुन चाउचाउ लत्ता कपडा बितरण गरेका छन् ।
जिल्ला खानेपानीको संयोजनले राप्ती ड्रिङकिङ वाटर र तुलसीपुर खानेपानी संस्थाले २५ कार्टुन खानेपानी उपलब्ध गराईसकेको छ । यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाईटि गढवाको संयोजनमा जिल्ला शाखा दाङले त्रिपाल, लत्ता कपडा कम्बल बाल्टिन भाँडाकुडा राहात प्रदान गरेको छ । साथै गढवा उद्योग बाणिज्य संघ लगायत अन्य थुप्रै गैर सरकारी तथा निजि संस्थाहरुले राहत उपलब्ध गराईसकेका छन् ।
तर दाङको एकदमै बिकट मानिने खिर्कि र खंग्रा नाकाका अग्नी पिडितहरुले भने अहिले सम्म ६ हजारमै चित्त बुझाउनु परेको स्थानिय क्लबका अध्यक्ष अमृत खडकाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –“ त्यहाँका अग्नी पिडितहरुका लागी तत्कालै त्रिपालको आबश्यकता छ तर अहिलेको राहत प्रयाप्त छैन् । ”कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले यस क्षेत्रमा राहतको लागी कुनै पहल गरेका छैन्न , उहाँले भन्नुभयो –“ सुगम ठाउमा मात्रै संस्थाहरुले राहत उपलब्ध गराएका छन् तर दुर्गम क्षेत्रलाई भने बिर्सेको जस्तो महशुस भएको छ । ” अहिले त्यहाँका अग्नीपिडितहरुले बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगको आशा गरिरहेका छन् ।
Previous articleनयाँ बर्षको शुभकामना सबैलाई ……..
Next articleघोराहीमा जि.एस. स्नुकर हाउस